Maitiro ekushingirira Mukutengesa Pasina Kudzima Madhiri Ako | Martech Zone
Maitiro ekushingirira Mukutengesa Pasina Kudzima Madhiri Ako
Muvhuro, Kukadzi 21, 2022 Muvhuro, Kukadzi 21, 2022 Samir Sampat
Nguva ndizvo zvese mubhizinesi. Inogona kunge iri mutsauko pakati peangangoita mutengi mutsva uye kusungirirwa pairi.
Hazvitarisirwe kuti iwe unosvika pakutengesa kutungamira pakuedza kwako kwekutanga kufona. Zvinogona kutora miyedzo mishoma sezvinoratidzwa neimwe tsvakiridzo inogona kutora nhare dzinosvika gumi nesere usati wasvika pakutungamira parunhare kekutanga. Ehe, izvi zvinoenderana nezvakawanda zvakasiyana uye nemamiriro ezvinhu, asi mumwe muenzaniso wekuti nei zvichigona kunetsa kune mabhizinesi kugona nzira yekutengesa.
Mune ino positi, isu tichavhara zvese zvauchazoda kuziva nezve kuita mafoni ekutengesa kune inotungamira, uye zvakanyanya kukosha, kuita mafoni ekutengesa anotungamira kune kushandurwa kwevatengi kutsva. Kunyangwe bhizinesi rega rega richange riine rakati siyanei tarisiro yekusvika nzira, pane zvechokwadi mamwe matipi uye akanakisa maitiro anogona kukubatsira iwe nebhizinesi rako munzira kuita sarudzo dziri nani.
Tisati tachera zvakadzika mune izvo, ngatitorei nekukurumidza kutarisa mamiriro ekutengesa, kushava pasi nenhamba.
Maererano ne HubSpot uye Spotio:
40% yevashandi vese vekutengesa vanoti kutsvaga ndicho chikamu chakaoma chebasa ravo
Parizvino, 3% chete yevatengi vese vanovimba nevamiriri vekutengesa
80% yekutengesa inoda zvishoma shanu kufona kwekutevera, nepo vakawanda se44% yevatengesi vanorega mushure mekutevera kumwechete (mbiri dzese dzese mafoni)
Vatengi vanotaura kuti vangangogamuchira runhare rwekutengesa kana rwakaitwa panguva yakambobvumiranwa
Inogona kutora yakawanda seyo 18 kudana kuti ubatane nemunhu angangove mutengi
Mhosva yekutengesa kufona kune inotungamira inogona kuvhiringa. Nekudaro, zvinobatsira kunzwisisa kuti zvinhu zvakamira papi kuitira kuti iwe uzive mafambiro mberi kuti uwane kubudirira kwebhizinesi rako. Uye mukupindura mubvunzo wekuti inguva yakadii kumirira pakati pekufona, iwe unozogona kuwana yakatetepa chiyero chekushingirira pasina kugumbura tarisiro yako yekutengesa.
Kune zvakare yakawanda iripo data iripo iyo inogona kubatsira kutungamira nzira yako yekutaura, zvakare.
Ikozvino, ngatinyatso taura nezvekutengesa kuzvibata uye kuita mafoni ekutengesa.
Kuita The Sales Call
Kana iwe waita yekutanga kutengesa kufona, iwe unenge uchida kuve wakagadzirira zvizere kune chero zvingangoitika kubva pakufona. Iva wakagadzirira kuti foni ipindurwe nemutungamiri wako uye upe chirevo chako sezvaunenge uchisiya meseji uye woiedza zvakare gare gare. Uye ndiwo mubvunzo wemamiriyoni emadhora-inguvai gare gare?
Yese inotungamira uye mutengi achave akasiyana, sezvazvinowanzoitika kune chero zvimwe zvese muhupenyu. Nekudaro, kana iwe ukaita yekutanga kutengesa kufona, iwe unozoda kuve nechokwadi chekuti wagadzirira kuvhura musuwo wehukama hutsva uye angangoita mutengi mutsva. Kazhinji, vamiririri vekutengesa vanoenda pakarepo kuvharo, izvo zvinoita kuti vakurumidze kuvharwa vasati vafona vasati vaziva kuti vari kutengeswa.
Kana mutungamiri akasapindura foni yako kekutanga, unofanira kusiya voicemail inofadza asi ine udzame kana paine sarudzo yekuita kudaro. Vakoke kuti vakufonere nenhamba yakanakisa kuti vasvike kwauri kana kuvaraira kuti ungafara kubatana panguva inovaitira zvakanyanya. Nenzira iyi, urikupa yako inotungamira sarudzo dzekusarudza kubva uye pfungwa yekudzora mumamiriro ezvinhu. Vanhu vazhinji vanozoshandura sarudzo yavo nekungopihwa sarudzo yekugamuchira runhare kumashure panguva yakarongwa uye nenguva.
Kutevera Nekupa Pane Zvinotarisirwa
Nepo vatengi vazhinji vachitarisira mhinduro yekutanga kumubvunzo kubva kubhizinesi mukati memaminetsi gumi kana pasi, kazhinji, vanopa kuchinjika kana zvasvika pakuenderera mberi kuonana uye kutaurirana. Nyanzvi dzekuvandudza bhizinesi dzinokurudzira kuti iwe unofanirwa kubvumidza 48 maawa mushure mekunge wadaidza mutungamiriri usati wasvika zvakare kwavari. Izvi zvinogonesa kuti iwe wabvumidza nguva yehurongwa hwavo hwekubatikana pasina kuuya sekutsamwisa kana kupererwa. Inopawo yako inotungamira nguva yekufunga chigadzirwa chako kana sevhisi uye kana chiri chinhu chavanoda kana chavanoda.
Unogonawo kuita kuti vanotarisira vazive kuti vanogona svika kwauri uye kuti vanokwanisa kuzviita kuburikidza nematanho akati wandei. Izvi zvinoita kuti vasarudze chiteshi chavanonyanyonzwa kugadzikana nacho uye zvinogona kuwedzera mikana yako yekugamuchira mhinduro yekudzoka. Uye kunze kwekunge wanyatsofonerwa kana kukumbirwa kuti udzoke runhare nekukasira, usafonere iyo inotungamira kaviri muzuva rimwe chete. Inongosiya kuravira kwakashata mumuromo we lead nekuti kazhinji inobuda seyakanyanya kumanikidza uye yekupererwa.
Chiyero chinofadza, chinoita, chiri pakati pemaawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana nemasere kune yechipiri uye inotevera yekutevera mafoni. Semuyenzaniso, kana iwe watofonera tarisiro yako kaviri svondo rino, ungangoda kufunga kumirira kusvika svondo rinouya kune kumwe kuedza kufona. Iyo yakapfava yekuenzanisa chiitiko chemaonero pano, hongu, uye iwe unofanirwa kuona izvo zvinokuitira zvakanyanya iwe nebhizinesi rako. Nekutora hemboro yekuti kufona kwako kwekutevera kunoenda sei, iwe unogona kazhinji kuwana zano riri nani rezvinoshanda zvakanyanya kuchikwata chako.
Chokwadi, imwe nzira nechokwadi kuti zvose nhare dzekutengesa dziri kuitwa (uye dzinogamuchirwa) munguva yakakodzera ndiko kurega mumwe munhu achiitira iwe nechikwata chako basa racho. Outsourcing inokupa iwe sarudzo yekuve nechikwata chehunyanzvi kudivi rako chinonzwisisa zvese zvinouya nekuita zvinobudirira zvekuteedzera mafoni ekutengesa, mafoni ekutsigira, uye nezvimwe kuti bhizinesi rako rirambe richishanda. Kana iwe ukafunga kuti ungasiira macallbacks kune mumwe munhu iwe uchitarisa kune vatengi vako, izvo zvinova nechokwadi chekuti kufona kwese kunodzoserwa munguva chaiyo uye nemhedzisiro inogoneka.
Smith.ai vamiririri vanokufonera, vachinatsiridza kukurumidza-ku-kutungamira uye kusaremedza vashandi vanoda kusvika kune vatengi. Ivo vanozofonera-vanotungamira pamhepo vanozadza mafomu ewebhu, vanobata vanopa kuti vavandudze mipiro, kudzingirira mubhadharo pamainvoice asina kubhadharwa, nezvimwe. Vanotozotumira maemail ekutevera uye zvinyorwa mushure mekufona kwese kuti ive nechokwadi chekuti kubatana kwaitwa.
Kutevera nekukurumidza kana Smith.ai vamiririri vechokwadi vanoshanda sechikwata chako chekusvika:
Dzidza Zvakawanda Nezve Smith.ai
Tags: aichakagadzirwa njerehubspotoutreachkutengesa kufonasales call statisticssales call statskutengesa kuteverakutengesa kusvikasmith.aispotiokufona chaikovirtual outbound mubatsirimubatsiri wezwi
Samir Sampat ndeyeKushambadzira uye Zviitiko Inoshamwaridzana nayo Smith.ai. Smith.ai's 24/7 virtual receptionists uye live chat vamiririri vanotora uye kushandura inotungamira nerunhare, webhusaiti chat, zvinyorwa, uye Facebook. Unogona kutevera Smith.ai pa Twitter, Facebook, LinkedIn, uye YouTube.